LRM ayaa durbadiiba diyaarineysa maalgalinta ololaha madaxtooyada ee 2022 - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA LRM waxay mar hore diyaarineysaa maalgalinta ololaha madaxweynaha ee 2022 ee Macron
LRM ayaa durbadiiba diyaarineysa maalgalinta ololaha madaxtinimada ee Macrifka ee 2022
Lacagaha xubinimada, iibsashada kursi, kordhinta deeqda ... Jamhuuriyadda socodka ayaa qeexday istiraatiijiyad muddo dheer ah oo lagu falanqeynayo ilaha dakhliga madaxweynaha.
By Alexandre Lemarié Ku qor maanta 06h15, cusbooneysiiyay 06h37
Waqtiga Akhrinta 6 min.
Madaxweynaha 2022? Sida rasmiga ah, Emmanuel Macron kama hadlayo arrintaas "Marnaba", wuxuu xaqiijiyay Ismaelel Emelien oo hore u ahaa, marinka 27, on BFM-TV. Marka laga eego muuqaalka, madaxwaynaha ayaa weli taliyay askartiisa si loo dhiso istaraatijiyad maaliyadeed oo muddo dheer ah, si loo helo habab lagama maarmaanka u ah ololaha marka ay timaado.
"Madaxweynuhu marnaba kuma odhan doono dadweynaha. Laakiin wuxuu u maleynayaa kaliya 2022. Waa mishiinkiisaayuu yidhi mid ka mid ah la-taliyayaashiisa. Istaraatiijiyadda oo dhan waxay diirada saaraysaa hadafkan ugu dambeyn. " Labada xisbi iyo dhaqaale ahaan labadaba.
In Jamhuuriyadda The on (RSM), sacab muggiis oo askari oo ay leeyihiin hawsha ekaysiinaya xisbiga galay mashiinka doorashada dhabta ah, khayraadka ballaaran si wax looga qabto jago ee xoogga lahaa doorashada soo socota waxaa, labada 2020 degmada ee sanadka soo socda ee waaxyaha iyo gobolka, iyo dhammaan ... codbixinta soo socda Elysian kor ku xusan.
"Lacag soo celiya"
Waxaa ka mid ah wafdiga guud, Stanislas Guerini, oo ah go'aan gaaraya; kaaliyihiisa, Pierre Person; Khasnajiga, Gregory Potton, oo daawanaya dhammaan xisaabaadka; iyo kuxigeenka (LRM) ee Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebbari, oo u xilsaaran qorshaha maalgelinta. Quartet waxa uu ka shaqeeyaa xidhiidhka qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha maamulka xisbiga.
Mudnaanta koowaad? "Inaad lacag soo qaadato. Iyada oo la doonayo in la adkeeyo oo la kala saaro ilaha dhaqaalaha si aaney kaliya ku tiirsaneyn maalgelinta Dawladda ", ayaa soo koobay mid ka mid ah.
"Sida xisbi kasta oo siyaasadeed, LRM waxay dooneysaa in ay awooddo in ay maal-galiso ololaheeda mustaqbalka ee mustaqbalka"wuxuu xaqiijiyay Mudane Djebbari. Xilligan, tababarku wuxuu leeyahay miisaaniyad ku dhawaad ​​23,5 million euro sannadkii, taas oo ku salaysan mid ku salaysan kharashka dadweynaha. 2018, waxay heshay malaayiin 22,5 - oo ah wax ka badan lacagtii 100 ee muddada ah - iyada oo ay ugu wacan tahay natiijooyinka wanaagsan ee doorashadii 2017 ee June. Lacag aad u badan, taas oo ka dhigaysa xisbiga ugu qanisan France. Maaha deyn sababtoo ah dhalinyaradiisu waxay ka duwan tahay qaabab kale, sida Jamhuuriyaadka (LR) ama Rallyka Qaranka (RN).
"Shakhsiyaadka" qaar ka mid ah xildhibaannada
Si kastaba ha noqotee, hoggaamiyayaasha Macronist ayaa loo adeegsadaa in ay isku raacaan xooggooda maaliyadeed, xoogsaarista waxay ku tiirsanaan karaan oo keliya gargaarka dawladda. Ama ku dhawaad. Mugga deeqda "Kaliya" ilaa ku dhawaad ​​1 million euro, ee 2018. "Waxaan leenahay lacag ka yar Xisbiga Sucuudiga ee 2012", Daawashada Christophe Castaner markii uu ahaa hogaanka ku muujinayo farqiga in PS ee, RSM ma leedahay kursigiisii, oo uusan ku biirin midna xubnaha loo doortay ay.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/04/09/lrm-prepare-deja-le-financement-de-la-campagne-presidentielle-de-macron-en-2022_5447663_823448.html
Armand Noutack II ayaa waydiisatay Cabral Libi inuu raali galiyo ra'yiga dhaqdhaqaaqa ee kow iyo toban milyan oo muwaadiniin ah
Les leaders de la démission refusent les procédures de destitution immédiates lors d'une conférence téléphonique urgente
Histoire – Des hôtels très particuliers à Moulins : l’hôtel du Buisson ou le faste entêtant d’un salon Louis XVI
DADKA & LIFESTYLE3,124